Asia Dragon Carton Box | Products
လူကြီးမင်းတို့ ၏ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်ပိုးရာတွင် အသုံးပြုလိုသော အလေးချိန်ပေါ် မူတည်၍ လှိုင်းတွန့်အထူ/ အပါး အမျိုးမျိုးဖြင့် ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ ရောင်စုံပုံနှိပ်ပြီး Duplex နှင့် လှိုင်းတွန့်အထူအပါးကပ်ခြင်းကို အထူးဆောင်ရွက်ပေးပြီး ကြိုက်နှစ်သက်ရာ လူကြီးမင်းတို့ ၏ ထုတ်ကုန်များ အတွက် Company Logo များထည့်သွင်း ရိုက်နှိပ်ပေးပါသည်။
ပရိဘောဂ ပစ္စည်း အမျိုးမျိုး ပန်းပု၊ စဉ်းအိုး ၊ ယွန်းထည် နှင့် စက်ပစ္စည်းများထုတ်ပိုးရာတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး မိမိတို့ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Size များကို စိတ်တိုင်းကျ မှာယူ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့ ၏ တန်ဖိုးကြီး ပစ္စည်းများ ထိခိုက် ကျိုးပဲ့လွယ်သော ပန်းပုရုပ်ထု၊ ပရိဘောဂ၊ ကြွေထည်ပစ္စည်း Electronic ပစ္စည်းများ ထုတ်ပိုးရာတွင် မရှိမဖြစ် အသုံးပြုရသော ပစ္စည်း ဖြစ်သည်။ Packing (၁) လိပ်တွင် မီတာ (၁၀၀) ပါရှိပြီး အလိပ်အမြင့်မှာ (၅၁) လက်မပါရှိပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့ ၏ တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းများ ထိခိုက်ကျိုးပဲ့ လွယ်သော ပန်းပုရုပ်ထု၊ ပရိဘောဂ၊ ကြွေထည်ပစ္စည်း Electronic ပစ္စည်းများ ထုတ်ပိုးရာတွင် မရှိမဖြစ် အသုံးပြုရသော ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ Packing (၁) လိပ်တွင်တွင် မီတာ (၄၀၀) ပါရှိပြီး အလိပ်အမြင့်မှာ ( ၄၈) လက်မပါရှိပါသည်။
No.12, 113 Street, Taung Nyunt Gyi Ward,
Mingalar Taung Nyunt, Yangon.
(828 - 830), Shwe Taung Gyar Street,
South Dagon Zone (2), 63 Quarter, Yangon.
Copyright 2018 © Asia Dragon Carton Box. Designed by Triple Luck Web.